Amathiphu ekusebenziseni izithombe kusuka ku-Semalt
Siphila ezweni elibukwayo, futhi ukubaluleka kokusebenza kwesithombe akukwazi ukunakwa. Izithombe eziphakeme kakhulu zenza iwebhusayithi yakho ibonakale futhi ihambise eziningi ze-traffic. Ngaphandle kokuqukethwe okulungile nokusimamisa isithombe, kungenzeka ungalokothi uthole imiphumela oyifunayo - nokian nrzi. Ukuhlelwa kwesithombe kunenzuzo ngezindlela eziningi, isibonelo, inikeza ulwazi olungcono lomsebenzisi, luthinta isikhathi sokulayisha kwekhasi lakho futhi linikeza izinketho ezingcono zokuhlelwa. Ubuchwepheshe bokucinga obubonakalayo buye benza izinyathelo ezivelele ezinyangeni zamuva, futhi izinjini zokusesha azikwazi ukukhomba okuqukethwe kwezithombe. Ngakho-ke, bancike emibhalweni yezithombe zakho ukuze uqonde ukuthi lezi zithombe zithini nokuthi zihlobene kanjani nezihloko noma izihloko. Nasi amathiphu evelele wokuthuthukisa izithombe kubasebenzisi bewebhu kanye nama-blogger ahlinzekwa ngu-Max Bell, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt .
Imifanekiso yezithombe ayikwazi ukusiza ku-SEO:
Uma ufuna izithombe zakho zivule kuwebhusayithi, kufanele ube nokufinyelela okugcwele kwezithombe zesitoko. Kodwa izithombe ze-stock ayikwazi ukusiza ku-SEO ngoba kuzodingeka uqhubeke ne-SEO kanye ne-off-page SEO eceleni. Izingosi eziningi zigcwele izithombe zesitokisi esifanayo, ngakho kufanele ucabange ngezithombe ezingavamile nezikhangayo ezingakaze zisetshenziswe. Ngisho nalapho izithombe zesitoreji zithuthukisiwe, ziyoba nemiphumela efanayo noma izinzuzo ze-SEO njengezithombe zangempela.
Sebenzisa izithombe eziphezulu:
Kubalulekile ukusebenzisa izithombe eziyingqayizivele nezinga eliphezulu kuzo zonke izihloko zakho. Izithombe eziningi ezintsha ozisebenzisayo, kungcono ukuthi izinkinga zakho zibekwe ezinjini zokusesha..Izithombe zangempela kusho ukuthi kufanele usebenzise izithombe ezingenayo i-copyright. Uma ungenayo ukufinyelela ku-Shutterstock noma i-Getty Images, ungathatha izithombe zangaphakathi endlini usebenzisa ikhamera. Nikeza izivakashi zakho ulwazi oluningi mayelana nomkhiqizo wakho, futhi kungenzeka kuphela ngamavidiyo abukeka ngokumangalisayo nezithombe.
Nikeza amakhasimende akho umbono wekampani yakho, noma unikeze isithombe somkhiqizo ophezulu ukuthi izivakashi zakho zizoziphendulela.
Abasebenzisi abaningi abazinaki izithombe zesitoreji. Izithombe ezisemgangathweni zangempela zivumela ukuthi uphume emiphumeleni yokusesha, ubonise ubuntu bomkhiqizo wakho futhi udonse abantu abaningi kuwebhusayithi yakho.
Kungakhathaliseki ukuthi isithombe osikhethile, kufanele uqiniseke ukuthi izithombe zikhululekile ukusebenzisa, futhi azikho izingxabano ze-copyright. Uma ufinyelela ku-Shutterstock, Getty Images, DepositFiles noma amanye amapulatifomu afanayo, ungasebenzisa izithombe eziningi ngendlela oyifunayo ngaphandle kokukhathazeka ngombango we-copyright. Kodwa uma ungenayo amalayisense ukusebenzisa izithombe zabo, kuzomele ubhekane necala elibizayo. Ngaphansi kwe-DMCA (i-Digital Millennium Copyright Act), abasebenzisi abakwazi ukusebenzisa okuqukethwe komuntu nemifanekiso njengoba kungase kuphule imibandela ye-copyright.
I-JPEG ingcono kakhulu:
Kukhona amafomethi wesithombe ahlukene, kodwa i-JPEG iyona engcono kakhulu futhi isetshenziswe ngesithombe. Inikeza eziningi zokukhetha ukugcina ikhwalithi yezithombe zakho uma usuqedile noma ucindezelekile. Ungadlala ngemibala, amaphethini, nezithunzi ukuze uqinisekise ukuthi isithombe sokugcina sinjengokuhlelwa kwesayithi lakho kanye nokuqukethwe. Kuyiqiniso ukuthi izithombe ze-JPEG kulula ukucindezela futhi zingasetshenziswa zombili ngobukhulu obukhulu namakhulu.
Uma kuziwa ku-SEO, kubalulekile ukubiza izithombe zakho. Kufanele udale amagama amancane kodwa anemininingwane yezithombe zakho futhi uqinisekise ukuthi igama elingukhiye eliyinhloko lengeziwe kulawo magama. I-Google, i-Yahoo, ne-Bing izokwenyuka okuqukethwe kwakho nezithombe kalula uma amagama angukhiye nemishwana esetshenziswa kahle.